“ အနာဂတ် ဆရာဝန်လေး ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)မှ သူရဲကောင်းတစ်ဦး ကြွေလွင့်ခဲ့ပြီ ” – Real News
“ အနာဂတ် ဆရာဝန်လေး ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)မှ သူရဲကောင်းတစ်ဦး ကြွေလွင့်ခဲ့ပြီ ”
၁၄-၀၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် တာမွေမြို့နယ်၊ ရဲစခန်းအမှတ်(၄၀)ရှေ့၌ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) Foundation Year ကျောင်းသား ကိုခန့်ညားဟိန်းသည် ရင်ဘတ်ကျည.်ထ.ိမှန်ကာ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရသောရဲဘော် ကိုခန့်ညားဟိန်းအား ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံးမှ အစဉ်အမြဲ ဂုဏ်ယူအမှတ်ရနေမည်ဖြစ်သည်။သူရဲကောင်းတို့ရှိရာ ကောင်းမွန်ရာအရပ်၌ အားအင်အပြည့်ဖြင့် အနားယူပါတော့။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၌ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီရရှိပြီး အာဏာရူးအဖွဲ့အား အမြစ်ပြတ်တော်လှန် အရေးယူနိုင်သည်အထိ အဆုံးတိုင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟု ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကတိသစ္စာပြုပါသည်။
“ အနာဂတျ ဆရာဝနျလေး ဆေးတက်ကသိုလျ(၁)မှ သူရဲကောငျးတဈဦး ကွှလှေငျ့ခဲ့ပွီ ”
၁၄-၀၃-၂၀၂၁ ရကျနတှေ့ငျ တာမှမွေို့နယျ၊ ရဲစခနျးအမှတျ(၄၀)ရှေ့၌ ဆေးတက်ကသိုလျ(၁) Foundation Year ကြောငျးသား ကိုခနျ့ညားဟိနျးသညျ ရငျဘတျကညြ.ျထ.ိမှနျကာ ကဆြုံးခဲ့ရသညျ။
မိမိတိုငျးပွညျအတှကျ ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုကျပှဲဝငျရငျး ကဆြုံးခဲ့ရသောရဲဘျော ကိုခနျ့ညားဟိနျးအား ဆေးတက်ကသိုလျ(၁) ကြောငျးသားထုတဈရပျလုံးမှ အစဉျအမွဲ ဂုဏျယူအမှတျရနမေညျဖွဈသညျ။သူရဲကောငျးတို့ရှိရာ ကောငျးမှနျရာအရပျ၌ အားအငျအပွညျ့ဖွငျ့ အနားယူပါတော့။
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၌ စဈမှနျသော ဒီမိုကရစေီရရှိပွီး အာဏာရူးအဖှဲ့အား အမွဈပွတျတျောလှနျ အရေးယူနိုငျသညျအထိ အဆုံးတိုငျဆကျလကျတိုကျပှဲဝငျသှားမညျဟု ဆေးတက်ကသိုလျ(၁) ကြောငျးသားသမဂ်ဂမှ ကတိသစ်စာပွုပါသညျ။
0nline မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ နိမိတ်တွေက တကယ် … ဖြစ်လာမှာလား …ထူးဆန်းတဲ့ KBZ ပြက္ခဒိန် ……